Na-esi ísì ọbara na egwu na onye ọhụụ ọhụrụ 7 4D Candle - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Isi Ọbara na Egwu na Onye Ọjọọ Ọhụrụ 7 4D Candle
Isi Ọbara na Egwu na Onye Ọjọọ Ọhụrụ 7 4D Candle
by admin January 5, 2017 1,035 echiche
Nke Shannon McGrew dere
Ọtụtụ ndị egwu egwu amatala nke "Resident Evil" aha, olee otú ha na-agaghị adị?
Eluigwe a abụrụla isi ihe dị egwu kemgbe egwuregwu vidio pụtara na 1996 na ihe nkiri ahụ na 2002. Na atụmanya nke egwuregwu kachasị ọhụrụ ha,"Onye Ọjọọ Ọjọọ 7: Biohazard", nke na-eme ka ndị na-ekiri banye na mpaghara ntụrụndụ 4D na Jenụwarị 24, otu ụlọ ọrụ chọrọ inundate uche gị ọbụlagodi.
Geek merchandiser Merchoid ga-ahapụ a "Onye Ọjọọ Ọjọọ 7: Ọbara, Ọsụsọ, na Egwu 4D VR Candle" na ememe nke nkeji ohuru.
Ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta n'ime Resident evil ezughị, ndị okike nke ndị omeiwu na-egbu ọbara ezubere ha n'ụzọ dị otú a iji mejupụta echiche gị nke isi, na-enye gị ahụmịhe emelitere, karịa enyoanya.
Amaghị m na ọ bụ ihe dị mma, mana ekwesịrị m ikwenye na m nwere mmasị. Ndị na-ese ihe na-ekwu na isi ndị a ga-echetara anyị "osisi ochie, akpụkpọ anụ, yana ikekwe ọbara which" nke bụ ihe dị elu karịa isi isi ozu.
Banyere senti na-egbu egbu? Emere kandụl ahụ ka ọ dịruo oge 18-20 ma nwee ọnụahịa nke $ 18.99 nke na-abụghị nke ukwuu mgbe ị na-enweta kandụl dị mma - ọbụlagodi na ọ dị n'etiti ọnwụ, mbibi, na undead.
site na Merchoid
Ọ dị ka kandụl ahụ anaghị ere ere ugbu a na weebụsaịtị, mana enwere m mmetụta ozugbo agbakwunyere ha, ha ga-ere, yabụ gbaa mbọ hụ na ị na-echekwa azụ Merchoid.
Nke a bụ ihe a ga - enwerịrị, ọkachasị ma ọ bụrụ n’ịchọrọ ijikọ ya na ahụmịhe egwuregwu gị mgbe ị na - egwu egwu "Onye Ọjọọ Ọjọọ 7: Biohazard".
Maka m, enwere m obi ụtọ ịhụ kandụl ndị ahaziri mgbe ihe nkiri na ihe odide kachasị amasị anyị, m na-atụ anya na m ga-aga n'ihu na nchịkọta nke kandụl jupụtara na ụjọ. Ọ bụ mgbe niile ka mkparịta ụka dị ukwuu.
update: A na-ere kandụl ndị ahụ na Merchoid, mana ka dị site na Numskull.